Gịnị Bụ Web Wee Gbara Ọchịchịrị, Miri Weebụ, na Mkpa / Weebụ Weebụ? | Martech Zone
Ịgụ Oge: 4 nkeji
Anyị anaghị ekwukarị gbasara ịntanetị ma ọ bụ ihe gbasara ya Ochichi Uzo. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mere ezigbo ọrụ nke ịchekwa netwọkụ dị n’ime ha, ịrụ ọrụ site na ụlọ emeghewo ụlọ ọrụ achụmnta ego maka egwu ndị ọzọ nke ịbanye na hacking.
20% nke ụlọ ọrụ kwuru na ha chere nsogbu nchebe n'ihi onye ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Na-anọ n'ụlọ: COVID-19 na-emetụta nchebe azụmahịa
Nchebe cybers abụghịzi ọrụ CTO. Ebe ntụkwasị bụ ego kachasị ọnụ ahịa na weebụ, ọ dị oke mkpa na ndị isi azụmaahịa na-eme ka ha mara ihe ọghọm ahụ yana otu esi ejikwa nsogbu ọhaneze ọ bụla nwere ike ịgbaso ọdịda ahụ. Nakwa, na ndị otu azụmaahịa na-arụ ọrụ nke ọma yana data ndị ahịa dị oke ọnụ ahịa… ohere maka ngabiga mkpuchi nchekwa abawanyewo nke ukwuu.
Mkpokọta Weebụ, Miri Weebụ, na Weebụ Ọchịchịrị
Ejiri Intaneti mee ihe na mpaghara 3 dabere na otu esi enweta ozi dị n'ebe ahụ:
Kọwaa Weebụ ma ọ bụ Weebụ Web - ógbè mostntanetị nke ọtụtụ n'ime anyị maara nke ọma, nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịnweta n'ihu ọha nke edepụtara aha ya na injin ọchụchọ.
Ihe niile anyị nwere ike ịchọta na nchọta ọchụchọ na-eme naanị 4 ka 10% nke web.
Weebụ Web - Deep Web bụ mpaghara nke ịntanetị zoro ezo na ọha na eze mana ezighi ezi maka ọrụ obi ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, email gị bụ Web miri emi (ọ naghị edepụta ya site na injin ọchụchọ mana enwere ike ịnweta ya). Dịka ọmụmaatụ, a na-ewu nyiwe SaaS nke ahịa, na ntanetị miri emi. Ha choro nyocha iji nweta data n'ime. 96% nke Intanet bụ Web miri emi.
Ochichi Uzo - n'ime Weebụ Web bụ mpaghara nke thatntanetị nke zoro ezo na nzuzo. Ọ bụ mpaghara weebụ ebe amaghị aha dị oke egwu yabụ ka mpụ na-arụkarị ọrụ. Enwere ike ịchọta data mebiri emebi, mpụ mpụ, na mgbasa ozi na-akwadoghị, zụta ma ree ebe a. Enweela akụkọ banyere nke A na-ere ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ọrịre na Web Gbara Ọchịchịrị!
Ọchịchịrị Weebụ kọwara
Ọ dị mkpa ikwu na Web Gbara Ọchịchị abụghị maka mpụ ọ bụla activity ọ na-enyekwa ndị mmadụ ikike site na amaghị aha. Na mba ndị na-egbochi nnwere onwe ikwu okwu ma ọ bụ na-enyocha nkwukọrịta nke ụmụ amaala ha, Web Gbara Ọchịchị nwere ike ịbụ ụzọ ha ga-esi nyochaa ma chọta ozi nke gọọmentị na-agbasaghị ma ọ bụ jiri. Dịka ọmụmaatụ, Facebook dịnụ site na Weebụ Ọchịchịrị.
Naanị ndị pere mpe nke ndị ọrụ n'ụwa niile (-6.7%) nwere ike iji Web Gbara Ọchịchịrị maka ebumnuche ọjọọ na nkezi ụbọchị.
Source: Nsogbu ndị nwere ike ịnweta ụyọkọ netwọk ahaghị aha na mba ndị nweere onwe ha
Na mba nwere nnwere onwe ikwu okwu, ọ bụghị ebe mmadụ kwesịrị ịnọ, n'agbanyeghị. N'ime iri afọ atọ m rụrụ ọrụ n'ịntanetị, enwebeghị m mkpa ịga leta Weebụ Gbara Ọchịchịrị ma yikarịrị ka ọ gaghị ahụ.
Otu Ndị Ọrụ Ga-esi Gaa na Web Gbara Ọchịchịrị
Zọ kachasị banye na Weebụ Ọchịchịrị bụ site na a Network netwọk. Tor dị mkpụmkpụ maka Na yabasị rawụta. Tor bụ nzukọ na-enweghị uru na-eme nyocha ma mepụta ngwaọrụ nzuzo dị n'ịntanetị. Ihe nchọgharị Tor na-agbanwe ọrụ gị n'ịntanetị yana ị nwere ike ịkpọ oku ka ị nweta ụfọdụ .onion ngalaba n'ime Web Gbara Ọchịchịrị.
Emezuru nke a site na imechi nkwukọrịta ọ bụla n'ọtụtụ ihe nzuzo nke ezoro ezo nke a na-ebufe site n'ọtụtụ isi usoro. Mkparịta ụka Tor na-ebido n’enweghị nsogbu gaa na otu n’ime ọnụ ụzọ ntinye aha ndị edepụtara n’ihu ọha, na-akwalite ọnụọgụ ndị ahụ site na etiti agbapụta ahọpụtara na-enweghị usoro, ma mesịa mechie arịrịọ gị na nzaghachi gị site na nkwụsị ikpeazụ
Enwere ọbụna saịtị iji chọọ ihe onwunwe ọbụlagodi Web Gbara Ọchịchịrị. Fọdụ nwedịrị ike ịnweta site na ngalaba nchọgharị na-ahụkarị… ndị ọzọ bụ akwụkwọ ndekọ aha Wiki nke ndị ọrụ na-achịkọta. Fọdụ na-eji AI iji chọpụta ma wepu ozi iwu na-akwadoghị… ndị ọzọ na-emeghe ịkọwapụta ihe niile.
Ọchịchịrị Web Nlekota
Imirikiti data ndị omempụ a na-azụ ma na-ere na weebụ gbara ọchịchịrị bụ nchekwa data, ọgwụ, ngwá agha, na ihe adịgboroja. Ndị ọrụ na-eji mkpuchi iji mee ka azụmaahịa ọ bụla belata ma zookwa ya.
Sdị achọghị ịchọta data ha mebiri emebi na Web Gbara Ọchịchịrị… ọ bụ ihe nro nke PR. Enwere ọchịchịrị web nlekota azịza d ị iche iche maka ika ọ ga - abụrịrị na ndị otu ndị ọzọ na - enyocha gị maka ịchọta ozi nkeonwe gị.
N'ezie, mgbe m jiri iPhone m banye na saịtị ma chekwaa paswọọdụ m na Keychain, Apple dọrọ m aka ná ntị mgbe ahuru otu n’ime okwuntughe m na ngabiga… ma kwado ka agbanwee ya.
Debe ngwanrọ gị niile nke oge, ọ bụghị naanị ngwanrọ mgbochi nje gị.
Jiri ọtụtụ okwuntughe siri ike - enweghị otu okwuntughe maka ihe niile. A paswọọdụ management ikpo okwu dị ka Dashlane na-arụ ọrụ nke ọma maka nke a.
Jiri VPN - netwọọkụ ikuku nke ọha na nke ụlọ nwere ike ọgaghị echekwa otu ị chere. Jiri VPN software iji guzobe nkwukọrịta netwọk echekwara.
Lelee ntọala nzuzo gị niile na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta gị ma mee ka ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ ọtụtụ nbanye abanye ebe niile.
Enweghị m otu akaụntụ dị oke mkpa nke na anaghị m ebu ụzọ banye paswọọdụ m wee nweta ederede passphrase nke abụọ na ekwentị m ma ọ bụ lelee anya site na ngwa nyocha ekwentị. Nke ahụ pụtara na, mgbe hacker nwere ike nweta aha njirimara na paswọọdụ gị, ha ga-enwe ike ịnweta ngwaọrụ mkpanaka gị iji weghachite passphrase site na ozi ederede ma ọ bụ mmemme nyocha.
Chọọ mkpọchi ma ọ bụ HTTPS na windo nchọgharị gị - karịsịa mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Nke ahụ bụ ihe na-egosi na ị nwere nchebe, ezoro ezo njikọ dị n'etiti ihe nchọgharị gị na ebe ị na-eleta. Nke a pụtara n'ụzọ doro anya na onye na-abanye na ntanetị netwọk gị enweghị ike ịhụ ozi ị na-agabiga na n'ihu.
Emeghela ma ọ bụ budata mgbakwunye site na adreesị email amaghị.
Adịghị pịa njikọ ọ bụla n'ime ozi email ma ọ bụrụ na ị maghị onye zitere ya.
Jide n'aka na enyere gị VPN na firewall aka.
Nwee akara aka na kaadị kredit gị maka azụmahịa ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ma a dọrọ gị aka ná ntị maka ngabiga data na ozi achọtara na Web Gbara Ọchịchịrị, tinye ya a Atụmatụ nsogbu nkwukọrịta PR ozugbo, gwa ndị ahịa gị ozugbo, ma nyere ha aka imebi ihe egwu ọ bụla.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta maka ọrụ mpụga na edemede a.
Tags: ndị ọka iwu cartwrightdoro anya na weebụweb ojiiweebụ miri emiokwuntughesecurityelu weebụna yabasị netwọkọkụtor netwọkna-akpata NyochaOkweysoftware vpnihekedu ihe doro anya na weebụgini bu ochichiri webkedu ihe miri emi webkedu ihe ihu weebụ
Feb 10, 2021 na 11:51 PM
Ọchịchịrị Weebụ bụ akụkụ dị ize ndụ nke Intanet